Muvhuro, Kukadzi 15, 2021 Muvhuro, Kukadzi 15, 2021 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, ndakapedza ongororo pamhepo uye yanga isiri basa… yaive yakashongedzwa uye yakapusa. Ndakatarisa kumusoro mupi uye ndaive Typeform. Typeform yakauya nekuti vafundisi vaida kushandura nzira inopindurwa nayo vanhu mibvunzo pazvikwangwani nekuita kuti maitiro acho awedzere kuve vanhu nekuwedzera kuita. Uye zvakashanda. Ngatizvitarisei ... tinorova fomu online uye kazhinji chiitiko chinotyisa. Kusimbiswa kunowanzo kuve
Kuongorora kwevatengi kunogona kukupa zano rekuti vatengi vako ndivanaani. Izvi zvinogona kukubatsira kuti uchinje, uye gadzirisa yako chiratidzo chechiratidzo, uye zvakare zvinogona kukubatsira iwe mukuita fungidziro nezve ravo ramangwana zvavanoda uye zvavanoda. Kuitisa tsvagiridzo kakawanda sezvaunogona inzira yakanaka yekugara kumberi kwekakona kana zvasvika kune zvinoitika uye zvaunofarira vatengi vako. Ongororo dzinogona zvakare kukurudzira kuvimba kwevatengi vako, uye pakupedzisira, kuvimbika, sezvo zvichiratidza